Yan Aung: ဒဿမတွေအကြောင်း...
အကြည်တော် မပြောခင်ကတည်းကလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာ ကြာပါရော့လား။
မတွေရော မုန်းတွေရော ဒသမတွေရော..
အရမ်းရယ်ရတာပဲ ကိုရန်အောင် ရေ.
အရှည်ကြီးရေးပေးတာ ဒိုးမို သိုင်းကျူးဒဲဂိုဇိုင်းမတ်စ်.
"ကျွန်တော် မ ကို ချစ်မိတာကလည်း တကယ်တော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပါ... မဖြစ်နိုင်တာ ၁၁၀ % နှုန်းလောက်ရှိနေတာကို ကျွန်တော့်ဖက်က အရမ်းကို စွဲလမ်းနှစ်သက်နေမိတယ်. "
မ ကို ကျွန်တော် ဆက်ချစ်မယ်. ဇောက်ချပြီးတော့ကို ချစ်မယ်...
ဖတ်ရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းမိပါဘူး ကိုရန်အောင်ရေ. :D ရယ်ရမှာတောင်အားနာသွားတယ်.
မသေခြာတဲ့ " မ" ကို မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ
ကိုရန်အောင် ရေ..လို့လဲ အကြံမပေးလိုတော့ပါဘူးလို့. :D
တစ်ခါမှ ဒီလောက်ရှည်တဲ့ postကို သေသေချာချာနဲ့ ပြီးအောင်အထိ မဖတ်ဖူးဝူးဗျ..း) tag တဲ့ သူကတော့ tag ရကျိုး နပ်ပါတယ်..
ဒီလောက်အရှည်ကြီးကိုတောင် ဖတ်တဲ့လူကို မပျင်းအောင်ရေးနိုင်တယ်။ တော်တယ် ကိုရန်အောင်ရယ်။ အပိုဒ်တိုင်းမှာ “မ” ပါနေတာလေး တစ်ခုပဲ။
နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်သွားတဲ့ ကိုရန်အောင် ပါဗျို့....
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံးတွေ အကြောင်းရေးတာထက် တစ် မ တည်း မ ပြီး မ ကို ချစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးရေးသွားတယ် :P
ရေးပေးမယ် ကိုရန်ရေ .... ကိုရန့်လက်ရာတော့ မှီမှာဟုတ်ဘူးး(
စရေးခိုင်းကတည်းက "မ" အကြောင်းပါကိုပါမယ်ဆိုတာ
သိနေလို့ ကျမကလဲ "မ" အကြောင်းလေးပါ ပါအောင်ထည့်ရေးပါလို့ ပြောထားခဲ့သေးတာ.
ရှင်.. အဟီးး ( ပြောတော့ဘူး.)
တ "မ" " မ" နဲ့
ဂိုမန်းနဲ.. ပျင်းလို့ရေးသွားတာ. :D
အင်း ရေးထားတာကတော့ တကယ်လက်ရည်မကျသေးတဲ့ ဘိုးတော်ရန်ပါပဲ
နာ့ကို ပြန်တက်ဂ်ထားတာကိုး အိုကီ
နဲနဲတော့ ကြာမယ် ဖြစ်တယ်ဟုတ် :P
မလေး အဲလိုမျိုး ရေးတတ်ချင်ပါတယ်..
ကြိုးစားပြီး အဲလို ရယ်စရာဖြစ်အောင် ရေးကြည့်ပါဦးမည်။
ဦးရန်ရေ..ရယ်ရမလို..ငိုရမလိုနဲ့....တိုးတိုးလေးပဲရယ်သွားတော့မယ် ခွိခွိခွိ.....ဟိဟိ....ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းပါတယ်ချင့် “မ”..ဆိုတာကြီးပဲနော်.....အဲ့ဒီလိုချစ်တတ်လွန်းလို့လဲ လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ပဲနေသွားရမှာမြင်ယောင်သေးတယ်ဗျို့